Thursday November 19, 2020 - 09:02:51 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warbixin cusub oo kasoo baxday hay'adaha caafimaadka mareykanka ayaa lagu sheegay in dad kabadan In kabadan rubuc malyuun qof ay ku dhinteen gudaha wadankaasi Mareykanka.
Tirada dadka u dhintey virus-ka corona ee ku soo ifbaxaya dalka Mareykanka waxay ka gudubtay a 250,000 oo ruux sida lagu sheegay xog ay daabacday Jaamacadda Johns Hopkins taas oo tixraac u ah bukaannada iyo dhimashada ka dhalatay cudurka faafa ee Covid-19.
Mareykanka oo dhowr toddobaad ka hor laga dareemayay koror cusub oo Carona ah waa waddanka ugu badan ee laga diiwaan geliyay dhimashada cudurkan halista ah ee caalami ahaan loo yaqaan 'corona virus'.
Tirakoobkan oo soo baxay gelinkii dambe ee maalintii Arbacada waxaa lagu cadeeyay in dhimashadu ay gaartay 250,029 qof american ah, waddanka labaad ee Carona ladhiban waa Brazil oo ay ku dhinteen 166,699 waxaana ku xiga Hindiya iyadoo ay ku dhinteen 130,993 qof, kaalinta Afaraad ee dalka ugu dhimashada badan Carona waa Meksiko oo ay ku dhinteen 99,026 qof.
Mareykanka sidoo kale waa dalka ugu horreeya adduunka marka la eego tirada dadka uu ku dhacay viruska Carona maadaama tirada la xaqiijiyay ee cudurka 'Covid-19' ay ku dhacday in ka badan 11 milyan oo qof gobollo iyo magaalooyin waaweyn ah oo Mareykanka katirsan ayuu cudurku dib ugusoo rogay celiyay balse magaalooyinkaas lagumasoo rogin wax bandaw ah arrinkaas oo sababay in caabuqu uu si xowlli ah markale usii faafo.
Laga bilaabo maalinta Khamiista magaalada New York waxay xiri doontaa iskuuladeeda dadweynaha sababo la xiriira cudurka oo si aan hore loo arag ugu dhax faafay ardayda da'yarta ah sidaas waxaa xaqiijisay waaxda waxbarashada Federaaliga ah.